1 TESALỌNAIKA 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TE 5)
Europe North America South America Central America Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia South East Asia South Asia Etiti Asia Etiti ọwụwa anyanwụ Africa Kọntinent Australia Asụsụ Ochie
Afrịka Xhosa Asụsụ Ndebele Akpan Asụsụ Amharik Wolaytta Onye Naijiria Mossi Ika Dinka Kabyle Ewe Asụsụ Swahili Morocco Asụsụ Somali Shona Madagaska Igbo Lingala Baoule Siswati Tsonga Tswana Onye Gambian Ndi Yoruba Kenya Kinyarwanda Hausa Chewa Luo Makua
Nhọrọ Bible ↴ 2006 1988
MATIU MAK LUK JỌN ỌLU OZI ROM 1 KỌRINT 2 KỌRINT GALETIA EFESỌS FILIPAI KỌLỌSI 1 TESALỌNAIKA 2 TESALỌNAIKA 1 TIMỌTI 2 TIMỌTI TAITỌS FAILIMON HIBRU JEMES 1 PITA 2 PITA 1 JỌN 2 JỌN 3 JỌN JUD NKPUGHE
5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16 5:17 5:18 5:19 5:20 5:21 5:22 5:23 5:24 5:25 5:26 5:27 5:28
1 TESALỌNAIKA 5
Ugbu a, ụmụnna anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-emezu? Echeghị m na m nwere ihe ọ bụla ikwu banyere oge ha ga-emezu.
Nꞌihi na dị ka unu nile maara nke ọma, ọ dịghị onye maara mgbe ha ga-emezu. Onyenwe anyị ga-abịa mgbe a na-eleghị anya ya, dị ka onye na-ezu ohi si abịa mgbe a na-eleghị anya ya.
Mgbe ọtụtụ mmadụ ga-asị, “Udo dị, ihe nile na-aga nke ọma,” mgbe ahụ, na mberede, ka oke ịla nꞌiyi dị egwu ga-adakwasị ha, ọ dịkwaghị otu onye ga-agbanarị ihe ọjọọ ahụ. Ihe mgbu ahụ ga-adị ka ihe mgbu na-adakwasị nwanyị ime na-eme.
Ma unu onwe unu, ụmụnna anyị, abụghị ndị na-amaghị ihe ndị a, echekwaghị m na ụbọchị ahụ ga-abịakwasị unu na mberede dị ka ndị ohi si abịakwute mmadụ.
Nꞌihi na unu nile bụ ụmụ ìhè, unu na-ejegharị nꞌehihie. Unu abụkwaghị ụmụ nke ọchịchịrị na abalị.
Nꞌihi nke a, nọọnụ na nche. Unu arahụkwala ụra dị ka ndị ọzọ. Kama nọọnụ na nche na-ele anya ọbịbịa ya.
Nꞌihi na abalị bụ mgbe ndị na-arahụ ụra ji arahụ ụra. Ọ bụkwa nꞌabalị ka ndị mmanya na-egbu na-aṅụbiga mmanya oke.
Ka anyị nile, bụ ndị bi nꞌìhè bụrụ ndị anya doro, ndị ji okwukwe na ịhụnanya kpuchie onwe ha, na ndị yikwasịrị onwe anyị okpu igwe ahụ nke bụ olileanya anyị na a ga-azọpụta anyị.
Nꞌihi na Chineke akwadebeghị ikpe ọmụma na egwu nye anyị. Kama ọ bụ nzube ya ka ọ zọpụta anyị site nꞌokwukwe anyị nwere nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst.
Ọ nwụrụ ọnwụ nꞌihi anyị, ka anyị nwee ike isoro ya dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Nke a ga-emezukwa mgbe ọ lọghachiri, ma anyị nwụrụ anwụ, ma anyị dị ndụ.
Anyị na-arịọsị unu ike, ụmụnna anyị, ka unu na-asọpụrụ ndị nile na-adọgbu onwe ha nꞌọrụ nꞌihi unu, ndị ahụ na-elekọta unu nꞌime ọrụ Onyenwe anyị, na ndị ahụ na-adụ unu ọdụ.
Ka unu na-akwanyere ha ugwu site nꞌịhụnanya nꞌihi ụdị ọrụ ha na-arụ. Ka unu na mmadụ ibe unu birikwa nꞌudo.
Ka onye ọ bụla ghara inyeghachi mmadụ ibe ya ihe ọjọọ nꞌọnọdụ ihe ọjọọ. Kama gbalịsienụ ike ịrụ ọrụ ziri ezi nye onye ọ bụla.
Na-aṅụrịnụ ọṅụ nꞌime okwukwe unu oge nile.
Na-ekpenụ ekpere oge nile na-esepụghị aka.
Na-enyenụ Chineke ekele mgbe nile banyere nile, nꞌihi na nke a bụ ọchịchọ Chineke banyere unu ndị bụ nke Kraịst Jisọs.
Unu abịanyụla Mmụọ Nsọ dị nꞌime unu.
Ọzọ, unu eledala onyinye ibu amụma anya.
Kama nwapụtanụ ihe nile ịchọpụta ma ha bụ ọchịchọ Chineke. Ha bụrụ ọchịchọ ya jidesienụ ihe nile ahụ ziri ezi aka nke ọma.
Wezụganụ onwe unu nꞌihe ọjọọ nile.
Biko ụmụnna anyị, na-ekperenụ anyị ekpere.
Werenụ isutụ ọnụ dị nsọ kelee ụmụnna anyị dum.
Iwu m na-enye unu site nꞌaha Onyenwe anyị bụ ka unu gụpụta akwụkwọ a nꞌihu ụmụnna nile.
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst dịnyere unu nile.
1 TESALỌNAIKA 5:1
1 TESALỌNAIKA 5:2
1 TESALỌNAIKA 5:3
1 TESALỌNAIKA 5:4
1 TESALỌNAIKA 5:5
1 TESALỌNAIKA 5:6
1 TESALỌNAIKA 5:7
1 TESALỌNAIKA 5:8
1 TESALỌNAIKA 5:9
1 TESALỌNAIKA 5:10
1 TESALỌNAIKA 5:12
1 TESALỌNAIKA 5:13
1 TESALỌNAIKA 5:15
1 TESALỌNAIKA 5:16
1 TESALỌNAIKA 5:17
1 TESALỌNAIKA 5:18
1 TESALỌNAIKA 5:19
1 TESALỌNAIKA 5:20
1 TESALỌNAIKA 5:21
1 TESALỌNAIKA 5:22
1 TESALỌNAIKA 5:25
1 TESALỌNAIKA 5:26
1 TESALỌNAIKA 5:27
1 TESALỌNAIKA 5:28
1 TESALỌNAIKA 1 / 1TE 1
1 TESALỌNAIKA 2 / 1TE 2
1 TESALỌNAIKA 3 / 1TE 3
1 TESALỌNAIKA 4 / 1TE 4
1 TESALỌNAIKA 5 / 1TE 5